ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကနေဒါ ကြက်ဆင် ဂျာမနီ စင်္ကာပူ စပိန် ဆွီဒင် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ကိုရီးယား ထိုင်ဝမ် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် နယ်သာလန် နော်ဝေ ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘရာဇီး မက္ကစီကို မလေးရှား ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယူနိုက်တက်စတိတ် ရုရှားနိုင်ငံ သြစတြီးယား သြစတြေးလျ အက်စ်တိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အာဂျင်တီးနား အိန္ဒိယ အိုင်ယာလန် အီတလီ ဥရောပ AMS (အမ်စတာဒမ်ချိန်း) ASE (NYSE Market က (AMEX)) ASX (သြစတြေးလျစတော့အိတ်ချိန်း) BER (ဘာလင်စတော့အိတ်ချိန်း) BRU (Euronext ဘရပ်ဆဲလ်) BSE (ဘုံဘေစတော့အိတ်ချိန်း) BTS (Bats ဂလိုဘယ်စျေးကွက်များ) BUE (Buenos Aires စတော့အိတ်ချိန်း) CNQ (CNQ) CPH (ကိုပင်ဟေဂင်စတော့အိတ်ချိန်း) DOH (DOH) DUS (Dusseldorf စတော့အိတ်ချိန်း) EBS (ဆွစ်ဇာလန်အီလက်ထရောနစ် Bourse) ENX (Euronext အနကျအဓိပ်ပါယျ) FRA (Frankfurt စတော့အိတ်ချိန်း) GER (XETRA စတော့အိတ်ချိန်း) HAM (ဟမ်းဘတ်) HEL (ဟယ်လ်စင်ကီစတော့အိတ်ချိန်း) HKG (ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်ချိန်း) ICE (ရေခဲပြင် Futures ဥရောပ) IOB (နိုင်ငံတကာအမိန့်စာအုပ်) ISE (အိုငျးရစျ) IST (အစ္စတန်ဘူလ်စတော့အိတ်ချိန်း) JKT (ဂျကာတာစတော့အိတ်ချိန်း) KLS (မလေးရှားဖလှယ်ရေး) KSC (ကိုရီးယားစတော့အိတ်ချိန်း) LIS (Euronext လစ္စဘွန်း) LIT (Lit) LSE (လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း) MCE (မက်ဒရစ်စတော့အိတ်ချိန်း (ကြောင်)) MCX (မော်စကိုချိန်း (MOEX)) MEX (မက္ကစီကိုစတော့အိတ်ချိန်း) MIL (မီလန်စတော့အိတ်ချိန်း / Borsa Italia) MUN (မြူးနစ်) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NIM (NASDAQ GIDS) NMS (NASDAQ) NSI (NSE) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (နယူးဇီလန်စတော့အိတ်ချိန်း) OBB (OTC သတင်းလွှာဘုတ်အဖွဲ့ Market က) OSL (အော်စလို Bors) PAR (Euronext ပဲရစ်) PCX (NYSE Arca) PNK (ပန်းရောင် Sheet များ) RIS (RIS) SAO (BOVESPA - စဝ် Paolo စတော့အိတ်ချိန်း) SES (စင်္ကာပူအိပ်ချိန်း) SET (ထိုင်းနိုင်ငံစတော့အိတ်ချိန်း) SHH (ရှန်ဟိုင်းစတော့အိတ်ချိန်း) SHZ (ရှန်ကျန်း) STO (စတော့ဟုမ်းစတော့အိတ်ချိန်း) STU (စတုဂတ်စတော့အိတ်ချိန်း) TAI (ထိုင်ဝမ်စတော့အိတ်ချိန်း) TAL (OMX ဘောလ်တစ်အိတ်ချိန်း - Talinn) TOR (တိုရွန်တိုစတော့အိတ်ချိန်း) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (တိုရွန်တို Venture ချိန်း) VIE (ဗီယင်နာစတော့အိတ်ချိန်း) YHD (စက်မှုလုပ်ငန်း)
ပိုင်းခြေအထွက်နှုန်း - တဦးတည်းရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးရှယ်ယာနှုန်းယခုနှစ်မြတ်များများအတွက်ပေးဆောင်ပမာဏ၏တစ်ဦးအချိုးအစား။
1. Dividends Central Japan Railway Company
2. Dividends TOWA Corporation
3. Dividends Haitong International Securities Group Limited
4. Dividends First Ship Lease Trust
5. Dividends Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
6. Dividends Shenguan Holdings (Group) Limited
7. Dividends Meiko Electronics Co., Ltd.
8. Dividends Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
9. Dividends Shiseido Company, Limited
10. Dividends AAG Energy Holdings Limited
11. Dividends CH. Karnchang Public Company Limited
12. Dividends Wacom Co., Ltd.
13. Dividends Yara International ASA
14. Dividends Kikkoman Corporation
15. Dividends Emperor Entertainment Hotel Limited
16. Dividends Daikin Industries,Ltd.
17. Dividends CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
18. Dividends Enplas Corporation
19. Dividends Grupo Lala, S.A.B. de C.V.
20. Dividends Mexichem, S.A.B. de C.V.
21. Dividends Computer And Technologies Holdings Limited
22. Dividends Datang International Power Generation Co., Ltd.
23. Dividends Asia Cement (China) Holdings Corporation
24. Dividends Terumo Corporation
25. Dividends SinoMedia Holding Limited
26. Dividends EcoGreen International Group Limited
27. Dividends HOYA Corporation
28. Dividends China Power International Development Limited
29. Dividends Powerlong Real Estate Holdings Limited
30. Dividends Elecom Co., Ltd.
31. Dividends Country Garden Holdings Company Limited
32. Dividends Far East Horizon Limited
33. Dividends GSV CAPITAL CORP. DL-,01
34. Dividends transcosmos inc.
35. Dividends PetroChina Company Limited
36. Dividends Wing Tai Properties Limited
37. Dividends Thai Vegetable Oil Public Company Limited
38. Dividends Konami Holdings Corporation
39. Dividends SCREEN Holdings Co., Ltd.
40. Dividends True Corporation Public Company Limited
41. Dividends Capcom Co., Ltd.
42. Dividends Tobu Railway Co., Ltd.
43. Dividends Lippo China Resources Limited
44. Dividends Dampskibsselskabet Norden A/S
45. Dividends China Hongqiao Group Limited
46. Dividends Yunnan Water Investment Co., Limited
47. Dividends JM AB (publ)
48. Dividends Shimadzu Corporation
49. Dividends China Merchants Port Holdings Company Limited
50. Dividends Shougang Fushan Resources Group Limited
51. Dividends Pacific Online Limited
52. Dividends Shinsei Bank, Limited
53. Dividends Power Assets Holdings Limited
54. Dividends TESEC Corporation
55. Dividends Shanghai Industrial Holdings Limited
56. Dividends Guotai Junan International Holdings Limited
57. Dividends Telia Company AB (publ)
58. Dividends China Everbright Bank Company Limited
59. Dividends Giordano International Limited
60. Dividends Okuma Corporation
61. Dividends Wasion Holdings Limited
62. Dividends China Resources Power Holdings Company Limited
63. Dividends Sinopec Kantons Holdings Limited
64. Dividends Lundin Petroleum AB (publ)
65. Dividends China CITIC Bank Corporation Limited
66. Dividends Sysmex Corporation
67. Dividends SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.
68. Dividends Bank of Ayudhya Public Company Limited
69. Dividends Goldlion Holdings Limited
70. Dividends HANISON CONSTR. HLDGS
71. Dividends AngloGold Ashanti Limited
72. Dividends Bank of China Limited
73. Dividends Gjensidige Forsikring ASA
74. Dividends Agricultural Bank of China Limited
75. Dividends Penta-Ocean Construction Co., Ltd.
76. Dividends IRPC Public Company Limited
77. Dividends Komatsu Ltd.
78. Dividends Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited
79. Dividends FirstRand Limited
80. Dividends HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS
81. Dividends Bangkok Bank Public Company Limited
82. Dividends Clariant Chemicals (India) Limited
83. Dividends Sutter Rock Capital Corp.
84. Dividends Fantasia Holdings Group Co., Limited
85. Dividends K. Wah International Holdings Limited
86. Dividends China Overseas Land & Investment Limited
87. Dividends China Everbright Limited
88. Dividends Kerry Properties Limited
89. Dividends China Resources Land Limited
90. Dividends Taiyo Yuden Co., Ltd.
91. Dividends CK Infrastructure Holdings Limited
92. Dividends MinebeaMitsumi Inc.
93. Dividends Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
94. Dividends Bank of Communications Co., Ltd.
95. Dividends JEOL Ltd.
96. Dividends Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited
97. Dividends Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSA UBD Units
98. Dividends Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited
99. Dividends Bangkok Life Assurance Public Company Limited
100. Dividends China Everbright International Limited
101. Dividends Telenor ASA
102. Dividends Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
103. Dividends QINGDAO PORT INTL H YC 1
104. Dividends Keio Corporation
105. Dividends Consun Pharmaceutical Group Limited
106. Dividends Standard Bank Group Limited
107. Dividends Tianjin Port Development Holdings Limited
108. Dividends Henderson Land Development Company Limited
109. Dividends Sun Hung Kai & Co. Limited
110. Dividends Hysan Development Company Limited
111. Dividends Kasikornbank Public Company Limited
112. Dividends Sony Corporation
113. Dividends Huaneng Power International, Inc.
114. Dividends Guangdong Investment Limited
115. Dividends China Starch Holdings Limited
116. Dividends New China Life Insurance Company Ltd.
117. Dividends COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
118. Dividends Shenzhen International Holdings Limited
119. Dividends The Bidvest Group Limited
120. Dividends Gold Fields Limited
121. Dividends China Tian Lun Gas Holdings Limited
122. Dividends Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
123. Dividends Toshiba Tec Corporation
124. Dividends Sinopharm Group Co. Ltd.
125. Dividends NWS Holdings Limited
126. Dividends BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited
127. Dividends Qingling Motors Co., Ltd.
128. Dividends Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
129. Dividends China Mobile Limited
130. Dividends Sinotruk (Hong Kong) Limited
131. Dividends Shoprite Holdings Limited
132. Dividends China Taiping Insurance Holdings Company Limited
133. Dividends PICC Property and Casualty Company Limited
134. Dividends Shenzhen Investment Limited
135. Dividends Industrial and Commercial Bank of China Limited
136. Dividends Concord New Energy Group Limited
137. Dividends SoftBank Group Corp.
138. Dividends Hang Lung Group Limited
139. Dividends Sunlight Real Estate Investment Trust
140. Dividends China Construction Bank Corporation
141. Dividends China State Construction International Holdings Limited
142. Dividends Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
143. Dividends Fountain Set (Holdings) Limited
144. Dividends Shenzhen Expressway Company Limited
145. Dividends Shougang Concord Century Holdings Limited
146. Dividends China Minsheng Banking Corp., Ltd.
147. Dividends Cloetta AB (publ)
148. Dividends Anglo American Platinum Limited
149. Dividends Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
150. Dividends China Vanke Co., Ltd.
151. Dividends Poly Property Group Co., Limited
152. Dividends Hengan International Group Company Limited
153. Dividends Lenovo Group Limited
154. Dividends Qinhuangdao Port Co., Ltd.
155. Dividends Nidec Corporation
156. Dividends China Shineway Pharmaceutical Group Limited
157. Dividends Yuexiu Real Estate Investment Trust
158. Dividends Lena Gold-mining Lenzoloto
159. Dividends China Petroleum & Chemical Corporation
160. Dividends YASKAWA Electric Corporation
161. Dividends Securitas AB
162. Dividends Zhejiang Expressway Co., Ltd.
163. Dividends CGN Power Co., Ltd.
164. Dividends PTT Global Chemical Public Company Limited
165. Dividends China Communications Construction Company Limited
166. Dividends HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited Stapled Securities
167. Dividends Keisei Electric Railway Co., Ltd.
168. Dividends CITIC Limited
169. Dividends Shimizu Corporation
170. Dividends Jiangsu Expressway Company Limited
171. Dividends Vinda International Holdings Limited
172. Dividends SmarTone Telecommunications Holdings Limited
173. Dividends Fast Retailing Co., Ltd.
174. Dividends ZCCM Investments Holdings Plc
175. Dividends SITC International Holdings Company Limited
176. Dividends Norwegian Finans Holding ASA
177. Dividends Gruma, S.A.B. de C.V.
178. Dividends China Railway Construction Corporation Limited
179. Dividends Aker ASA
180. Dividends Hang Lung Properties Limited
181. Dividends DNB ASA
182. Dividends BOC Hong Kong (Holdings) Limited
183. Dividends AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited
184. Dividends CNOOC Limited
185. Dividends Uni-President China Holdings Ltd
186. Dividends Nichirei Corporation
187. Dividends Longfor Group Holdings Limited
188. Dividends Coor Service Management Holding AB (publ)
189. Dividends Tianjin Development Holdings Limited
190. Dividends Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
191. Dividends Anhui Conch Cement Company Limited
192. Dividends KCE Electronics Public Company Limited
193. Dividends Ju Teng International Holdings Limited
194. Dividends NCC AB (publ)
195. Dividends Bangchak Corporation Public Company Limited
196. Dividends Beijing Enterprises Holdings Limited
197. Dividends COSCO SHIPPING Ports Limited
198. Dividends Champion Real Estate Investment Trust
199. Dividends Tele2 AB (publ)
200. Dividends Sichuan Expressway Company Limited
အစုရှယ်ယာများအပေါ်ခွဲဝေပေးခြင်းသည်အစုရှယ်ယာဝင်များ၏အဓိက ၀ င်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီမှခွဲထုတ်ငွေများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ ၀ င်ငွေပါ ၀ င်ပြီးကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်။
Allstockstoday.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအားလုံးနှင့်သူတို့၏အမြတ်များအပေါ်ငွေပေးချေမှုပမာဏကိုပြသသည်။ ယေဘူယျ dividend ဇယားတွင်၊ အောက်ပါကွက်လပ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရှိကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်အစွန်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးနှုန်းကြီးထွားမှုနှင့်ကျဆင်းမှုကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အဓိက ၀ င်ငွေကိုဆုံးဖြတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းပမာဏသည်ကုမ္ပဏီမည်မျှအကျိုးအမြတ်ရှိကြောင်းနှင့်မည်မျှအောင်မြင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်အမြတ်အစွန်းပေးငွေများသည်ကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်ပေါ်သာမကဘဲ၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာများ၏မူဝါဒများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလိုလျှင်၊ များသောအားဖြင့်ခွဲဝေငယ်များသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ၀ င်ရောက်လာခြင်းကြောင့်၎င်း၏အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာစေရန်သေချာစေလိုလျှင်အမြတ်အစွန်းများများကိုပေးသည်။
အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်အစွန်း - အမြတ်အစွန်းများမှတဆင့်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမည်မျှရရှိမည်၊ ဝင်ငွေမည်မျှရရှိမည်ကိုအချိန်မှန်သတင်းအချက်အလက်များ။ အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာမြတ်များအားတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းသည်အစုရှယ်ယာ ၀ ယ်သည့်နေ့နှင့်အမြတ်ငွေပေးချေသည့်နေ့တို့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အမြတ်ဝေစုပေးချေခြင်းနှင့်အစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်းကြားကာလသည်ကြာကြာလေလေအကျိုးအမြတ်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် dividend မပေးမီကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။
ကုမ္ပဏီများမှခွဲဝေပေးငွေများ - ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအတွက်အမြတ်ဝေစုတစ်ခုစီအတွက်ညွှန်ကိန်းတစ်ခု။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များမှခွဲဝေပေးငွေပမာဏကိုသတင်းအချက်အလက်ယူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းသို့ယူဆောင်လာသည်။ dividend ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ငွေပေးချေမှုပမာဏကိုရှာသည်၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုပမာဏသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းသည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအဆင်ပြေပါသည်။
ခွဲဝေပေးငွေနေ့စွဲသည်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ များသောအားဖြင့်မြတ်များအားငွေပေးချေသည့်နေ့ရက်တွင်ငွေထည်များကြီးထွားလာသည်။ မြတ်များအထွက်နှုန်းပေးချေမှုနေ့စွဲပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းစတော့စျေးနှုန်းကျသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမြောက်အများသည်အစုရှယ်ယာများအပေါ်ခွဲဝေမှုများရရှိပြီးအမြတ်အစွန်းများပေးဆောင်သည့် နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကိုချက်ချင်းရောင်းချကြသည်။
ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းငွေပေးချေသည့်နေ့ကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပါ။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အမြတ်ငွေများကိုတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပေးချေနိုင်သော်လည်းတစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွက်ခွဲဝေပေးငွေနှစ်ရက်နှင့်အထက်ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု“ အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများမှအမြတ်အစွန်း” သည်ကမ္ဘာ့စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုထားသောကုမ္ပဏီများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးပုံမှန်အမြတ်အစွန်းမှထွက်သောငွေပမာဏအတိုင်းခွဲထားသောဇယားကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်းအမြင့်ဆုံးကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြတ်အစွန်းအများဆုံးကုမ္ပဏီများကိုချက်ချင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းကိုမဆိုစတော့ဈေးကွက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီးအမြတ်အစွန်းမြင့်မားသည့်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။